I-Secluded Waterside Cottage, ePembrokeshire - I-Airbnb
I-Secluded Waterside Cottage, ePembrokeshire
Saint Ishmael's, Wales, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Lizzie
U-Lizzie Ungumbungazi ovelele
Owake waba yindlu yezihambi esukela ngasekupheleni kwawo-1800, i-Sloop manje isiyindlu ethokomele ngasemanzini amamitha nje ukusuka ogwini. Ibekwe ePembrokeshire Coast National Park inenqwaba yokuhamba nemigudu yamanzi emnyango wayo. Lapho amagagasi aphezulu jabulela ukugibela izikebhe ezansi nechweba noma ukugibela izigwedlo ukuya emabhishi angasese kuyilapho amagagasi aphansi embula ugu olude olunesihlabathi, ipharadesi lezinja kanye nebhuloho lokugwedla ukuze izingane zilijabulele.
Ifakwe endlini enhle yaseSandy Haven futhi esanda kulungiswa kabusha i-Sloop iyindawo ethokomele kodwa ehlomele kahle yokubaleka. Leli kotishi lilala abantu abahlanu emakamelweni amabili abanzi, ikamelo elilodwa lokulala eliyisipesheli elibheke umfudlana kanye negumbi lesibili elinemibhede emikhulu neyodwa. Kukhona igumbi lokugezela elilodwa elineshawa yokuhamba ngezinyawo kanye nenye indlu yangasese engeziwe phansi.
Phansi ikhishi linendawo yokupheka kagesi nehobhu, ifriji, umshini wokuwasha izitsha kanye ne-microwave. Sihlinzeka ngamathawula etiye nezindwangu zezitsha. Ikotishi linegumbi lokuwasha elinomshini wokuwasha kanye nesiqandisi esengeziwe uma ulidinga.
Umshini wokushisa izinkuni, iDVD kanye ne-smart TV ingatholakala endaweni evulekile yokuhlala neyokudlela
Amathawula (hhayi amathawula olwandle) kanye nelineni lombhede kufakiwe.
Ikotishi libuye lifakwe amabhodi omzimba kanye nekhithi yokugaxa ukuze uqinisekise ukuthi uthola okuningi emfudlaneni iSandy Haven kanye namabhishi endawo. Wamukelekile futhi ukuletha amabhodi akho okugwedla kanye nama-kayak.
Izinja zamukelekile kakhulu ekotishi nakuba sicela ukuthi zigcinwe phansi futhi sicela ngomusa omkhulu ukuthi ungabhemi ngaphakathi kwekotishi.
Impahla iphinde iza nendawo yokupaka yangasese ngqo phambi kwendlu.
4.94 · 70 okushiwo abanye
I-Sandy Haven Creek (Iphilisi)
Kusukela ogwini olungaphansi kwendlwana, into okufanele uyenze ezinyangeni ezifudumele ukuhlola umfula omude waseSandy Haven usebenzisa awakho ama-kayak noma amabhodi okugwedla. Ukuzilibazisa okudumile kufanele kukhushulwe emfudlaneni ngehora ngaphambi kwamanzi aphezulu, bese ujabulele amanzi axegayo ngaphambi kokubuyela phansi ngomfudlana emanzini aphumayo.
Njengoba unehlathi nhlangothi zombili okufanele uhlole kanye nendathane yezilwane zasendle ukuyibona kuyisipiliyoni esimnandi ngempela futhi qiniseka ukuthi uhlale ubhekile ukuphahlazeka komkhumbi omdala ongatholakala endaweni ethile ejikeni le-engeli elingakwesokudla phakathi nomfula. .
Omunye umsebenzi odumile wezingane ukugwaza kusukela ebhulohweni lezinyawo ukuwela i-Sandy Haven inlet kumagagasi aphansi. Ihlome ngamabhakede, ubude bezintambo nezingcezu zikabhekeni ibhakede eligcwele lezinkalankala ngokuvamile lingaqoqwa ngokushesha nje.
Ngaphezu kolwandle oluhle lwaseSandy Haven ngaphansi kwendlwana eliziveza emanzini aphansi, inkomishi ibekwe kahle ukuze ihlole amabhishi amaningi eduze nenhlonhlo yaseDale kungaba ngesikebhe, ngezinyawo noma ngemoto.
Kubagibeli bama-kayaker ababukhali nabanolwazi oluthe xaxa ngokushesha entshonalanga yokungena eSandy Haven creek kunamabhishi amathathu angasese asekelwa amawa amade afinyeleleka ngesikebhe kuphela.
Entshonalanga egudle indlela yogu, indawo yokungena engatholakala emzileni owehlela ekotishi kukhona amabhishi aseLindsway Bay kanye neMonks Haven. ILindsway Bay iyibhishi elihle elinesihlabathi esingaba yimizuzu engama-40 ukusuka endlini encane lapho amagagasi aphansi ekahle kakhulu ukubhukuda nokugibela umzimba. Elinye imayela usuka eLindsway kunendawo ethokozisayo yeMonks Haven eyake yaba indawo yesigodlo sezindela kanye nesiteshi sokubuka ngeMpi Yezwe Yesibili.
Ukuqhela kancane kodwa ukuhamba okufushane kuphela amabhishi amahle aseMarloes Bay, Musselwick Sands, Albion Sands kanye neSt Brides.
Ngogu lwayo olukhulu, amawa abanzi, amatheku avikelekile kanye nemifudlana enamanzi, leli cottage lisendaweni enhle ukubona impilo yezinyoni. Izivakashi zasentwasahlobo zingamagwinya, ama-warbler nezinyoni eziningi zasolwandle, ihlobo yisikhathi esihle sokubona amakoloni ezinyoni zasolwandle kuyilapho ubusika echwebeni lomfula kuletha ama-waders, ubugqila, amagreebs nama-egrets amancane.
I-Sloop nayo iyibanga elifushane nje ukuya endaweni yokwehla e-Skomer Island. Ikhaya lekoloni elikhulu kunawo wonke lama-Manx shearwaters emhlabeni, kanye nama-puffin, ama-guillemot, ama-razorbill, ama-chough nezikhova ezinendlebe emfushane ngempela kuyinto engenakulibaleka ngempela lapho ubudlelwano nezilwane zayo zasendle bungafani nanoma yibuphi oke wabuzwa.
Noma ngabe inqamula iziqongo zamawa, eduze kwamabhishi noma izulazula ezindleleni zezinyawo ezisogwini le kotishi itholakala ngokufanelekile kulabo abajabulela ukuhamba kahle. Siyaqaphela futhi ukuthi iyipharadesi elihamba ngezinja yingakho senze inja yasekotishi yaba nobungane!
Ukusebenzisa ngokugcwele amabhishi kanye nomfudlana inkomishi ifika ifakwe amabhakede okukhwabanisa namabhodi omzimba. Uma unama-kayak ungakwazi ukuhlola umfudlana olwandle kanye nogu olusentshonalanga yomnyango we-estuary kuyilapho amabhodi omzimba engasetshenziswa kahle kunoma imaphi amabhishi asendaweni.
Ukuhamba ibangana nje kuyi-Dale Bay ebanzi enikezela ngemidlalo yasemanzini eyahlukene yabaqalayo nabafuna ubumnandi ngokufanayo. Phakathi kwezinto ezenziwayo yilezi:-
I-stand Up Paddle boarding
Kungakhathaliseki ukuthi ungumuntu osanda kungena emanzini noma ungumtshuzi wegagasi omkhulu onolwazi olunzulu, ikotishi lisendaweni enhle ukuze lisebenzise inqwaba yemidlalo yokuntweza ukuze ifanele wena. Lokhu kubandakanya:-
ULizzie Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint Ishmael's namaphethelo